လောင်းကစားမှုပပျောက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့က မြဝတီမြို့မှာရှိတဲ့ မီးကျောင်းကုန်းကျောင်းတိုက်မှာ ဆွေးနွေးစဉ်
Photo: Nay Naw/ မြဝတီ
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့မှာ ငါးဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့ လောင်းကစားရုံတွေကို ဖမ်းဆီးနိုင်အောင် လူထုလောင်းကစား ဖမ်းဆီးရေး အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးဖို့ ဒေသခံ ၁၀၀ ကျော်က ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီး မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနထံ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
လောင်းကစားရုံတွေကို ဖမ်းဆီးဖို့ သက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ကြားပေမယ့် မဖမ်းဆီးတာကြောင့် ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ခွင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြ တာလို့ မြဝတီလူမှုကွန်ရက် အလုပ်အမှုဆောင် တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမျိုးအောင် က ပြောပါတယ်။
"လောင်းကစားဖမ်းဆီးရေး အဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့ပေးဖို့ ကျနော်တို့ သက်ဆိုင်ရာကိုတောင်းဆိုမယ်၊ အဲဒီအဖွဲ့ရတာနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ မြို့ပြင်မှာလိုက်ပြီးတော့ လူထုအင်အားနဲ့ လောင်းကစား ဖမ်းဆီးဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်၊ သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ကိုလည်းပဲ အကြောင်းကြားစာတွေ ကျနော်တို့ပို့မယ်၊ နောက်ပိတ်ဆုံး အဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ လူထုဆန္ဒခံယူပြီး လူထုဆန္ဒပြပွဲကျင်းပဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်"
ဒီနေ့နေလည်က မြဝတီမြို့မှာရှိတဲ့ မီးကျောင်းကုန်းကျောင်းတိုက်မှာ ရပ်ကွက် ၅ ခုက ဒေသခံ ၁၀၀ ကျော်က ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာတွေအတွင်း လောင်းကစားမှုပပျောက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြဝတီမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေရဲ့ လမ်းတိုင်းမှာ ငါးဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့ အကြွေစေ့ဂိမ်းဆိုင်တွေရှိပြီး တစ်မြို့လုံးမှာ ဂိမ်းဆိုင် ၁၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီဂိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ဂိမ်းဆိုင်ကို နယ်ခြားစောင့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့က လုံခြုံရေး ယူပေးထားတာကြောင့် ဖမ်းဆီးဖို့တိုင်ကြားပေမယ့် ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေ မရှိဘူးလို့ မြဝတီလူမှုကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင်တွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီဂိမ်းဆိုင်တွေကြောင့် မြဝတီမြို့မှာ လူမှုရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေသလို ခိုးမှု၊ လုယက်မှု၊ လူသတ်မှုတွေများနေ တယ်လို့လည်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မြဝတီက လောင်းကစားရုံတွေ ရှင်းလင်းပေးဖို့ မြို့ခံတွေတောင်းဆို
Bravo to the citizens from Mya-wad-dy ! Such activities should be spread to other twons and cities.
Jul 30, 2017 11:20 PM